Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọzụzụ Air Traffic Control na-amalite na Kuwait
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Dịka akụkụ nke nkwekọrịta mmekọrịta mmekọrịta, Airways New Zealand na-enye ọzụzụ ọzụzụ otu afọ na ACK maka otu ụmụ akwụkwọ njikwa ụgbọelu ụgbọelu (ATC)
Dịka akụkụ nke nkwekọrịta mmekọrịta mmekọrịta, Airways New Zealand na-enye mmemme ọzụzụ otu afọ na ACK maka otu ụmụ akwụkwọ njikwa ụgbọelu (ATC) ma wụnye ngụkọta ụlọ ngụkọta ihe nchịkwa na ndị nyocha abụọ radar na klas ya na Kuwait maka iji n'oge ọzụzụ.
Linegbọ elu ahụ esonyela na Mahadum Australia nke Kuwait (ACK) iji guzobe ụlọ akwụkwọ ọzụzụ ọzụzụ ụgbọ elu ikuku maka ọzụzụ nke ụmụ akwụkwọ Kuwaiti.
Azịza azịza nke bespoke gụnyere teknụzụ nkenke ụwa na Airways, jikọtara ya na nkuzi dabere na ikike na e-mmụta. Ejirila usoro nnwale nnwale ATC dị na kọmputa iji họrọ ụmụ akwụkwọ; Total Control ịme anwansị technology bụ iji maka ezigbo-ụwa ọzụzụ; ụmụ akwụkwọ na-eji akụ ntanetị e-mmụta Airbooks maka mkpanaka, mmụta na mmekọrịta mmekọrịta; na mmemme mmụta ịntanetị ndị a na-ahụ maka ikuku na ikuku bụkwa maka ụmụ akwụkwọ.
Onye isi ụgbọ elu Airways International, Sharon Cooke, kwuru na mmekorita ya na ACK na-enye Airways ohere itinye usoro ọzụzụ ya zuru oke na nke ọma na Kuwait, ahịa ọhụrụ maka ndị na-eweta ọrụ ikuku ikuku New Zealand.
“Airways nwere obi ụtọ na ya na ACK na-arụkọ ọrụ a. Usoro egwu anyị na-eweta ọzụzụ ATC na klaasị ụwa na teknụzụ teknụzụ, yana agụmakwụkwọ ACK na onye ndu na mpaghara ahụ, pụtara na mmekọrịta a dị mma maka ọganiihu.
Otu ụmụ akwụkwọ ATC bidoro ọzụzụ na ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ahụ na Septemba, na-amụ ICAO 291 - Aviation English Services, ICAO 051 - ATS Licensing Ats, ICAO 052 - Aerodrome Control, ICAO 054 - Approach and Area Surveillance, na ICAO 053/055 - Approach na Usoro Usoro Usoro Mpaghara.
Ejiri ngụkọta njikwa radar na simulators ụlọ elu dị na Kuwait na Mee ma ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na-ejikwa ya iji chịkwaa okporo ụzọ na omume nke na-e theomi ụwa n'ezie - na-e imomi mpaghara ozi ụgbọ elu zuru oke na-eji nnukwu eserese foto-ezi uche eserese na simulating ọnọdụ ọ bụla ihu igwe.
Usoro ọzụzụ nke Airways ga-akwadebe ụmụ akwụkwọ ahụ maka ọzụzụ ATC na-arụ ọrụ na Kuwait.
Airways nọ na-enyefe azịza ọzụzụ ATC na ọrụ ndụmọdụ na mpaghara Middle East ruo ihe karịrị afọ 20 organizationlọ ọrụ ahụ na General Authority of Civil Aviation (GACA) arụ ọrụ na Saudi Arabia kemgbe afọ asatọ, na-azụ ụmụ akwụkwọ na-achịkwa ụgbọ elu ikuku na ya ụlọ akwụkwọ ọzụzụ na New Zealand, ọ bụkwa afọ a na-azụ ụmụ akwụkwọ si Fujairah, Kuwait na Bahrain.